6 amin'ireo mpanonta PDF tsara indrindra ho an'ny Ubuntu | Ubunlog
6 amin'ireo mpamoaka lahatsoratra PDF tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Mitadiava ary ny fahazoana vaovao amin'ny alàlan'ny rakitra amin'ny endrika PDF dia efa mahazatra, izay tsy toy ny taona vitsivitsy lasa izay, dia mbola tsy fahita firy. NAiray amin'ireo rindrambaiko malaza amin'ny famakiana sy fanovana ireo dia ny Adobe Acrobat.
Na dia tsy betsaka aza no maniry ny fampiasana an'io dia izany no antony amin'ity indray mandeha ity dia hizara aminao ny sasany amin'ireo tonian-dahatsoratra PDF malaza indrindra izahay izany dia tsy hanampy anao hahafahanao manokatra ny atin'ny rakitra PDF-nao fotsiny fa afaka manova azy ireo miaraka amin'ny fanampian'ireto.
Okular dia mpijery tahirin-kevitra malalaka misokatra maimaim-poana izay ahafahanao mijery antontan-taratasy sy manova ireo rakitra PDF fototra.
Aorian'ny fanokafana rakitra PDF ao Okular, azonao atao ny maka tahaka mora ny ampahan'ny lahatsoratra amin'ny fisafidianana azy amin'ny takelaka, na afaka tahirinao ho sary.
Ao amin'ny Tab Review Tools, dia hahazo ny safidy ianao toy ny tsipika an-tsipika, naoty pop-up, sary an-tsipika, tanana maimaimpoana, hajia, fanamafisam-peo ary endri-javatra hafa.
Okular afaka miatrika mora foana ireo lahasa fanovana PDF anao, fa ho an'ny fanovana mandroso dia tsy dia ilaina loatra.
Fandosirana PDF fampiharana mahasoa izy io ary tsy mila fampidinana, azon'izy ireo atao ny mampiasa an'io fitaovana io mivantana amin'ny Internet avy amin'ny mpitety tranonkala rehetra.
Es Maimaimpoana 100% raha toa ka tsy mihoatra ny pejy 100 ny PDF na 10 MB ny habeny.
Manana izao manaraka izao izy io toetra:
Miasa an-tserasera amin'ny alàlan'ny tranokalanao
Fitaovana maro no omena
Ahafahanao manampy ny lahatsoratrao sy ny sarinao manokana
Azonao atao ny manala sy manampy pejy amin'ny PDF
Sejda PDF Editor, a fahasamihafana amin'ireo tonian-dahatsoratra voalaza etsy ambony manana endri-javatra fanampiny izay mamela anao mamela anao manova lahatsoratra efa misy ao amin'ny PDF nefa tsy manampy mari-drano . Ny ankamaroan'ny tonian-dahatsoratra dia manitsy ny lahatsoratra ampianao ny tenanao fotsiny, na manohana ny fanitsiana lahatsoratra izy ireo fa avy eo manipy tandindona manerana ny toerana.
Ary koa, ity fitaovana ity afaka mihazakazaka tanteraka ao amin'ny tranokalanao, noho izany dia tena manana an'io safidy fanampiny io ny fampiasana azy nefa tsy mila misintona programa akory. Na izany aza, azonao atao ny mahazo ny kinova amin'ny birao raha tianao.
Evince dia mora ampiasaina mpijery antontan-taratasy ary tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny birao Gnome izy io. SAnisan'izany ny endri-javatra fanoratana sy fanontana antontan-taratasy, fijerena antontan-taratasy voahita, fitaovana fikarohana ary maro hafa.
Ao amin'ny he afaka mijery ireo fisie amin'ny endrika PDF, PostScript ary DjVu. Ny tanjon'i Evince dia ny hisolo toerana, miaraka amina rindrambaiko tokana, ireo mpijery antontan-taratasy marobe izay misy ao amin'ny GNOME, toy ny GGV, GPdf, ary xpdf.
Izy io dia voasoratra indrindra amin'ny fiteny fandaharana C, misy ampahany kely voasoratra ao amin'ny C ++, izay ny kaody hifandraisana amin'ny rindrambaiko Poppler.
Inkscape dia programa sary manaitra sary miavakas, sary matihanina maro natao manerantany no mampiasa tsy tapaka an'io rindrambaiko io.
Azonao atao ihany koa ny manitsy sy manafatra ireo rakitrao PDF. Ka afaka miasa tsara amin'ny fanovana Linux PDF.
Ny zavatra manelingelina ny olona sasany dia ny Inkscape tsy mandeha toa ireo mpanova antontan-taratasy hafa, izay manohana pejy maro toy ny LibreOffice Draw and Word. Ny rindrambaiko dia tsy manafatra pejy iray fotsiny isaky ny mandeha.
Qoppa PDF Studio dia mpamoaka lahatsoratra PDF ara-barotra natolotry ny rindrambaiko qoppa ary manana ny fiasa fanovana fototra rehetra izy io. Afaka mamorona, manova ary mandinika rakitra PDF mora foana ianao.
Manana ireto toetra manaraka ireto izy:
Azonao atao ny manova ny votoatin'ny lahatsoratra sy ny toetrany, ny zavatra ary ny endriny, ny manova ny habeny ary ny mamindra ny sary, ary manatsara ny PDF anao hampihena ny haben'ny rakitra.
Manampia boaty an-tsoratra, fanamarihana an-tsoratra freehand, boaty an-tsoratra, rohy hyperlink, sns.
Azonao atao ny mametaka ny rakitrao amin'ny rakitra PDF.
Soso-kevitra mivantana amin'ny PDF ny antontan-taratasy ary esory, esory na ampidiro pejy.
Mametaka takelaka, lohateny ary mari-drano
Azonao atao ny mametraka teny miafina amin'ny rakitra PDF
Ny endri-panohanana toa ny fikarohana an-tsoratra dia mampitaha ireo rakitra PDF mifanila, ny zahana ary ny mpanapaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » 6 amin'ireo mpamoaka lahatsoratra PDF tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Shalem Dior Juz dia hoy izy:
Mpanonta PDF Master tsy hita ho an'ny Linux, tena tsara izany.
Valiny tamin'i Shalem Dior Juz
Ny ankamaroany dia mpijery pdf fa tsy tonian-dahatsoratra.
Mpanonta pdf tsara dia "Master PDF EDITOR" https://code-industry.net/free-pdf-editor/
Keru dia hoy izy:
Mbola hazavaina ihany fa i Sejda dia mamela anao hanao fanontana 3 isan'andro fotsiny amin'ny antontan-taratasy iray ihany, raha te hanao fanontana fahaefatra ianao dia mila mandoa vola 8 dolara hampiasana azy mandritra ny herinandro na 63 dolara hampiasana azy mandritra ny herintaona . Any Amerika Latina amin'ny ankapobeny sy Arzantina manokana, 63 dolara dia vola be, eo ho eo. 40% amin'ny karama fototra.
Etsy ankilany, ny Master PDF EDITOR dia tsy "editor PDF maimaimpoana", araka ny doka, fa kosa maimaim-poana amin'ny asany fototra, izay azo atao ihany koa amin'ny Draw avy any Libreoffice, ohatra, ho an'ireo fiasa PDF EDITOR dia omena ihany koa ary ny kaody loharano handrafetana, hanovana, sns. dia tsy misy miharihary, izany hoe tsy Maimaimpoana, manao dokam-barotra diso.
Mamaly an'i Keru
Herme S. dia hoy izy:
Salama atoandro namako, ary iza no arosonao.
Valiny tamin'i Herme S.
Ahoana ny fahitana asteriskara eo am-panoratana ny tenimiafinao ao amin'ny terminal?
Ahoana ny fomba fampidinana feo avy amin'ny Youtube ao amin'ny Ubuntu